Sawirada qaar ee AirPods 3 waxaa lagu sifeeyay naqshad aad ugu eg AirPods Pro | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan ka hadalnay dhowr bilood waxa naqshadda jiilka saddexaad ee AirPods noqon doono, jiil saddexaad taas gebi ahaanba cusbooneysiin karto naqshadeeda si aad ugu egtahay AirPods Pro. Sawirada ugu horeeya ee xaqiijinaya qaabkan cusub waxaa laga helayaa shabakada 52codka.
Websaydhkani wuxuu la wadaagay sawirro kala duwan oo sheeganaya inay qayb ka yihiin jiilka 3-aad ee AirPods, sawirro na tusaya naqshad aad ugu eg AirPods Pro. Sawiradan ayaa na tusaya sameecadaha dhagaha iyadoo la adeegsanayo iyo daboolka sanduuqa daboolida mid ka mid ah sameecadaha.
Sawiradani waxay xaqiijinayaan macluumaadka ay Bloomberg ka daabacday jiilkan cusub, jiil cusub oo inkasta oo naqshadeynta, hadana macnaheedu maahan inay bixiso nidaamka baajinta dhawaaqa, tan iyo markaas AirPods Pro wax macno ah ma samaynayso, sidaa darteed malaha kaliya la wadaag naqshada, wax yar oo kale.
Marka laga hadlayo taariikhda suurtagalka ah in la sii daayo jiilkan cusub, Maarso sanadka soo socda waxay noqon kartaa taariikhda ay doorteen Apple, inkasta oo ay sidoo kale u badan tahay in cusboonaysiinta kala duwanaanta AirPods Pro laga filan doono inay ku bilawdo labada noocba suuqa.
Haddii aan ka hadalno samaacadaha dhegaha, waa inaan ka hadalnaa Studio-ka 'AirPods Studio', headphones-ka sida uu qabo Prosser waxay ku dhowdahay inay suuqa gashoSi kastaba ha noqotee, intii lagu jiray soo-bandhigiddii ugu dambeysay ee IPhone-ka, ma jirin wax raad ah oo iyaga ka mid ah.
Waxay u eg tahay, haddii markan Prosser sax yahay, in Studio-ka cusub ee AirPods si rasmi ah ayaa loogu soo bandhigaa dhacdada xigta kaas oo dhici doona 10-ka Nofeembar, oo ah dhacdo noocyada cusub ee kumbuyuutarrada Mac-yada ah oo ay ku jiraan processor-rada ARM si rasmi ah loo soo bandhigi doono, Apple Silicon maadaama ay shirkaddu baabtiisay.
Talaadada soo socota, Nofeembar 10, oo aan ka imid Mac ayaan kuu sheegi doonaa dhammaan wararka lagu soo bandhigo dhacdadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sawirada AirPods 3 waxaa lagu sifeeyay naqshad aad ugu eg AirPods Pro